Kuzomele sisebenzise amathuba - Thuso Phala | News24
Kuzomele sisebenzise amathuba - Thuso Phala
Johannesburg - Umdlali weBafana Bafana uThuso Phala ubona ukuthi iqembu lakhe lingakwazi ukumelana neqembu leSenegal elinabadlali abaqinile uma lamaqembu esebhekene kowe-Africa Cup of Nations e-Estadio de Mongomo namhlanje ebusuku.
INingizimu Afrika ifuna ukuthola amaphuzu njengoba yashaywa yi-Algeria ngo-3-1 emdlalweni wayo wokuqala, kwathi iTeranga Lions yona yaqumba phansi iGhana ngo-2-1 ngoMsombuluko.
Funda nalolu daba: Wenze izinguquko uMashaba kwelizodlala neSenegal.
UPhala, owashaya igoli leBafana emdlalweni wokuqala, uyalihlonipha iqembu abazobhekana nalo, kodwa unethemba lokuthi iBafana ingakwazi ukudlula kulo mdlalo, kubika iKickOff.com.
Lo mdlali weSuperSport United uthi: “ISenegal inabadlali abaqinile abadlala phesheya kwezilwandle futhi abadlala ibhola elihle. Bashaya iGhana, okukhomba khoba ukuthi abayona into yokudlala. Besazi kahle ukuthi kulo mqhudelwano kuzobanzima. Ngakho kuzomele uma sesibhekene neSenegal senze isiqiniseko sokuthi siyawasebenzisa amathuba,” usho kanje.